နောက်မြေပုံ NextMapping ™ထောက်ခံစာများ
နည်းပြနှင့် အတိုင်ပင်ခံ သုံးသပ်ချက်
လွန်ခဲ့သည့်3နှစ်ကျော်အတွင်း၊ Cheryl Cran နှင့် NextMapping တို့နှင့် အလုပ်လုပ်ရသည့်အတွက် ကျေနပ်မိပါသည်။ Cheryl သည် ကျွန်ုပ်၏ Executive Coach ဖြစ်ကာ ခေါင်းဆောင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အပြောင်းအလဲ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အလုပ်အဆင်သင့်ဖြစ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့တည်ဆောက်ရေး နယ်ပယ်များတွင် ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်သည် သူမ၏ နည်းပြသင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ နှင့် virtual training modules များအားလုံးကို အလွန်အထင်ကြီးစေသော သင်တန်းများကို တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ Cheryl သည် ကျွန်ုပ်၏စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံကို လျင်မြန်စွာဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး အမြင်များကို ပြန်လည်ဘောင်သွင်းရန်၊ အပြုအမူများကို ချိန်ညှိရန်၊ ရှုထောင့်မျိုးစုံကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒီလို ခက်ခဲတဲ့ အချိန်တွေ အတွင်းမှာ သူမ ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံ ခဲ့တယ် ။
အကြီးမြတ်ဆုံးဆုကတော့ တခြားသူတွေ ငါ့ရဲ့တိုးတက်မှုအတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်းနဲ့ အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ တွန်းအားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်း တခြားသူတွေကို ပြောပြတဲ့အခါ။ ကိုယ်နဲ့ Cheryl နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ တခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ပွင့်လန်းလာတာကို သတိပြုမိတယ်။ ၎င်းတို့သည် အပြောင်းအလဲကို လမ်းညွှန်လိုက်သည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့ကိုယ်မိမိ ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးချကာ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။
အလုပ်ရှင်များသည် အလုပ်၏အနာဂတ်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်နိုင်ပုံကို နားလည်ကူညီပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း။
ဒါဟာ မင်းနဲ့အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အခွင့်ထူးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အခုလိုလုပ်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ExecOnline Leadership Development Program တွင် ပါဝင်သူများထံမှ တုံ့ပြန်ချက်-
"ကျွန်တော်ဟာ ပေါင်းစပ်အဖွဲ့တွေကို ဦးဆောင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုအတော်လေး ထိရောက်တယ်လို့ ခံစားမိပေမယ့် Cheryl က ပိုထိရောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို နှစ်ကြိမ်လောက် စဉ်းစားပေးခဲ့တယ်... မျှဝေထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကိုလည်း သဘောကျတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က အရာရာတိုင်းကို ကြိုးစားလုပ်လေ့ရှိပေမယ့် အဲဒါက အသင်းနဲ့ မပတ်သက်ပါဘူး။”
"၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ကျွန်ုပ်၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၏ ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေရန်အတွက် သီးခြားကိရိယာများနှင့် ချဉ်းကပ်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။"
"မစ္စ Cran ပေးခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေက အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး ရှေ့ဆက်အသုံးပြုဖို့ နည်းလမ်းအသစ်တွေနဲ့ ကိရိယာတွေ ပေးတယ်။"
“လက်ရှိလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။”
“[The Action Plan] က အရာတွေကို ပိုကြီးတဲ့ရှုထောင့်နဲ့ ထားရှိပြီး ဒီပေါင်းစပ် virtual world မှာ လက်ရှိကျွန်ုပ်ရဲ့အဖွဲ့အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်ပုံရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားအောင် မီးမောင်းထိုးပြထားပါတယ်။ ဒီသင်တန်းက အကြံပြုထားတဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို အခြေခံပြီး အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်သွားမှာပါ။”
“ မင်းရဲ့ virtual keynotes အတွက်နောက်ထပ်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ Q and A follow up session ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းကအမြဲတမ်းသဘာဝဆန်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့စတိုင်လ်နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကွင်းဆင်းလေ့လာနိုင်သလို၊ အလုပ်ရဲ့အနာဂတ်၊ လုပ်သားတန်ဖိုးတွေအကြောင်းကိုလည်းလမ်းကြောင်းတွေပြန်ချပေးတယ်။ ခေါင်းဆောင်များ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်များ၏စိတ်ထဲရှိအရာများအားစဉ်းစားဆင်ခြင်သောတုံ့ပြန်မှုများကိုပုံဖော်ရန်ဤအရာများကိုသုံးပါ။
virtual keynote များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့စဉ်ကကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်မှုအသိုက်အဝန်းအားကျွန်ုပ်တို့၏အသွင်ကူးပြောင်းရေးခရီးအကြောင်းစဉ်းစားရန်နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်များအား၎င်းတို့မေးမြန်းသည့်ပုံစံများကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်၏အခန်းကဏ္ကိုမည်သို့ထင်ဟပ်စေခြင်းကိုအားပေးစေရန်ဖြစ်သည်။ အမှန်တရားအသစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရန်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။
မင်းကငါတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအောင်မြင်ပြီလို့ငါကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်၊ session တစ်ခုချင်းစီကမတူညီဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းကမင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုအုပ်စုတစ်စုစီရဲ့ ဦး တည်ချက်ကိုကျွမ်းကျင်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူနည်းပါတယ်။
စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်သူများ၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့ပါပြီ။
“ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းလွှမ်းမိုးမှု။ ခေါင်းစဉ်မခွဲခြားဘဲအလုပ်ရဲ့အနာဂတ်မှာလူတိုင်းကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါ။ ”
"ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနှင့်လူတစ် ဦး အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့သောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ "
Cheryl ၏အဓိကကျသောအချက်မှာနှလုံးသားပါ ၀ င်သည်။ သူမကကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းသားများနှင့်အမှန်တကယ်ပဲ့တင်ထပ်နေသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းအရာများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေမျှခဲ့သည်။ သူမအလုပ်နှင့်လက်တွေ့ဘ ၀ များအကြားသူမ၏ဆက်သွယ်မှုကိုကျေနပ်မိသည်။ မင်းဘဝမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာငါတို့အလုပ်မှာဘယ်လိုပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သူမသည်သူမ၏အဓိကအချက်များကိုထောက်ခံသည့်ကျယ်ပြန့်သောသုတေသနနှင့်အတူစာတိုပေးပို့မှုကိုကျွမ်းကျင်စွာဆွဲဆောင်သည်။ Cheryl ၏စာအုပ်စာအုပ်သည်မိမိကိုယ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်မှုအတွက်အနာဂတ်အရင်းအမြစ်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
အစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုတို့ပါ ၀ င်ခြင်းကြောင့်သူသည်ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးစကားပြောဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့ပင်ဤ virtual keynote ကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာတမ်းဖတ်ပွဲသို့ထိုကဲ့သို့သောမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သငျသညျအလုပျ၏အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်။ ကြီးမြတ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဆက်လက်ဆက်လက်အဖြစ်ငါသည်သင်တို့၏တိုးတက်မှုနောက်သို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
C. Schroeder - ဒါရိုက်တာ၊ CME
Enbridge သဘာဝဓာတ်ငွေ့ခေါင်းဆောင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပွဲမှ Cheryl ၏ Virtual Keynote အတွက်တက်ရောက်သူများအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
“ ဒီပွဲကိုစီစဉ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီစပီကာကအရမ်းစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပေးပါတယ်။
"Cheryl သည်သင်၏အဓိကစကားပြောသောမိန့်ခွန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ဖရင့်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏စောင့်ရှောက်မှု၊
အဖြစ်အပျက်စီစဉ်သူ - ServiceNow
EBAA 2020 အွန်လိုင်းညီလာခံတက်ရောက်သူများ၏ Cheryl's Virtual Keynote အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ -
“ အဓိကကျသောစကားပြောသူအသုံးပြုသောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုကျွန်တော်တကယ်သဘောကျတယ်။ ကျွန်တော်တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံ (နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်အနီးစပ်ဆုံး) ဖြစ်နိုင်သည်။ သူမ၏ပုံရိပ်ကိုသူမ၏ဆလိုက်ပေါ်ရှိအရာနှင့်လျော်ညီစွာပြန်လည်နေရာချထားသည်။
Cheryl ၏တင်ပြချက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနားထောင်နိုင်ခြင်းနှင့် monotony ချိုးဖောက်ခြင်းစသော platform ကိုကျွန်တော်နှစ်သက်သည်။
“ Cheryl ၏အချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားစိန်ခေါ်နေသောအချက်များနှင့်ပြန်လည်တည့်မတ်ပေးခြင်းကိုတွန်းလှန်ခြင်းနှင့်ထိုအချက်များကိုတွန်းလှန်ခြင်းထက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိန်ခေါ်နေသောအချက်များနှင့်နားလည်ရန်နှင့်တူညီသောအခြေခံကိုရှာဖွေရန်ရှာဖွေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းအတွက်အထူးတန်ဖိုးရှိပြီးအချိန်မီဖြစ်သည်။
"Cheryl နှင့်အတူအစည်းအဝေးတက်ကြွနှင့်လှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်မှုအတွေးအခေါ်သစ်နှင့်အသိဥာဏ်အသစ်များသည်အဖွဲ့အစည်းများကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ သူတို့သည်မော်ဒယ်များကိုအသုံးမပြုသေးလျှင်အသင်းတည်ဆောက်မှုတွင်ပိုမိုအောင်မြင်လိမ့်မည်။ ”
Cheryl ၏တင်ဆက်မှုသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးအလုပ်ခွင်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အကြံပြုချက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်သင်ယူခဲ့သည်။ ”
“ Cheryl၊ ခင်ဗျားရဲ့အမြင်ကိုပြသပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ တင်ဆက်မှုကောင်းပါတယ်!”
NextMapping ဟာအလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအချိန်မီတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ”
“ ဒီဘာသာရပ်အတွက်အချိန်ကိုက်သင့်တော်ပါတယ်။ ”
"သူမသူမ၏လျှော၏အောက်ခြေမှာပြောနေတာခေါင်းဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာကြိုက်တယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့သူမရဲ့နောက်ခံကဆလိုက်တင်ဆက်မှုကိုမပယ်ရှားနိုင်ခဲ့ဘူး။ ”
“ ဒါကိုသဘောကျတယ် စာနာမှုအပေါ်အလေးပေးလိုအပ်သည်။ "
"ဒါဟာစိတ်ကူးပဲ! သင်၏ virtual program သည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေပြီးပရိသတ်ကိုစွဲမက်စေခဲ့သည်။ ဒါဟာအစက်အပြောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "
ညီလာခံသဘာပတိ - EBAA
“ ကောင်းပြီကျနော်တို့ Cheryl ပြောတာကနှစ် ၅၀ သမိုင်းမှာဒီပွဲအတွက်ပရိသတ်အများဆုံးပါဝင်ခဲ့တာပါပဲ။
မေးခွန်းများကိုစာပို့ခြင်းနှင့်ပရိသတ်များမဲဆန္ဒပေးခြင်းတို့ဖြင့်ပရိသတ်ကိုစကားဝိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ခံစားစေခဲ့သည် - လွယ်ကူသောလုပ်ရပ်မဟုတ်ပါ။
Cheryl ၏အဓိကကျသောစတိုင်သည်ဖန်တီးမှုနှင့်ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ”
ဒါရိုက်တာ - NWLS
“ ကောင်းတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ထိုအကြီးမြတ်တင်ဆက်မှု, Podcast တခုကိုနှင့်မီးပွား session များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအားလုံးအပေါ်အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်တန်ချိန်ဆည်းပူးကြသည်။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ!"
H. Wetzel, Sr; ဒါရိုက်တာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အသင်းဝင်ဆက်သွယ်ရေး - NRECA
BMO Future of Work Event တက်ရောက်သူများထံမှရင့်ကျက်သောသုံးသပ်ချက်များ -
“ ဒီနေ့မနက်မှာအနာဂတ်အလုပ်အကိုင်အကြောင်းလေ့လာသင်ယူမှုနဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေတဲ့အတွေးအခေါ်ကောင်း - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ”
“ Cheryl သည်ကျွန်တော်တို့ကိုကနေဒါရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံသို့သင့်ကိုခေါ်ဆောင်လာသည့်အတွက်အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်၊ သင်၏ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်သည့်သုတေသနနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည်ကမ္ဘာကြီးကို ဦး တည်နေသည့်နေရာပင်ဖြစ်သည်။ ဒါကမသာပေမယ့်သင်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရတာတကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဒါပျော်စရာပဲ
Cheryl Cran မှ“ BMO သည်အနာဂတ်အနာဂတ်အလုပ် - အနာဂတ်အတွက်အဆင်သင့်သောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည်။ အလိုအလျောက်စနစ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ကျင့်သုံးသောကမ္ဘာကြီးတွင်နည်းပညာတိုးတက်မှုသည်အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီး၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအဖွဲ့များရှိခြင်းသည်အလုပ်များကိုလျှော့ချခြင်းမဟုတ်ဘဲအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်အဖွဲ့များကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်နှင့်အဓိကစီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကိုအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်တစ်ယောက်ကသူမကသူမဘဏ်လုပ်ငန်းနည်းနည်းလုပ်ချင်တယ်၊ စီးပွားရေးပိုလုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ် - ဒါကအနာဂတ်အလုပ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ခြေလှမ်းပဲ။ ”
အလွန်လေးနက်တဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက် Cheryl ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့် ၀ န်ထမ်းများကိုယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်တွင်အရည်အသွေးကောင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုများစွာကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော sidebar re အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အနာဂတ်အနာဂါတ်အဆင်သင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အတူတူ, ငါ့ကို "အတွေးအခေါ်ကို" ငါတို့ "အတွေးအခေါ်ကိုပြောင်းလဲကြကုန်အံ့! အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွင်းသင်မျှဝေခဲ့သောဗဟုသုတအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းစာအုပ်တွေကိုဖတ်ဖို့ငါမစောင့်နိုင်ဘူး”
“ BMO Financial Group ကနေဒါကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်လုပ်ငန်းဖောက်သည်များနှင့် Cheryl Cran တို့နှင့်နံနက်စောစောထိတ်လန့်စရာကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနံနက်ခင်း။ အလုပ်ခွင်ရှိနည်းပညာများကိုအနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီးနည်းပညာသည်လူများအတွက်ရလဒ်ကိုမည်သို့တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်ကိုအာရုံစိုက်သည်။ အသင်းအတွင်း ၀ င်ရောက်မှု၊ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိမှုနှင့်သေဒဏ်ပေးမှုများကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်သင်မည်သို့ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းလေ့လာရန်မျက်စိဖွင့်ခြင်းအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ”
“ ခေါင်းဆောင်မှုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အလုပ်၏အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲခြင်း” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရေးသားထားသော Cheryl သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်အုပ်စုနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ငါတို့အဖွဲ့သည်သင့်အား Las Vegas တွင်ရုံးချုပ်သို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ရသည့်အတွက် ၀ မ်းသာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွင်းဆင်းလူတိုင်းနှင့်တိုက်ရိုက်အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သူများထံမှကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်ချက်များစွာရရှိခဲ့သည်။
ပြောင်းလဲမှုခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အနာဂတ်“ သင်ယူသူ” နှင့်အနာဂတ်အစီအစဉ်စသည်တို့အပေါ်သင်၏မဟာဗျူဟာအချို့နှင့် ပတ်သက်၍ တွစ်တာဆွေးနွေးမှုများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
အနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ဆက်သွယ်ကြပါစို့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ”
ဂလိုဘယ်အကြီးတန်းမန်နေဂျာ၊ အရည်အသွေး - အရစ္စတိုတယ်နည်းပညာများ
ASQ Conference တက်ရောက်သူများ၏ 'text' ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
"ဒါကပါ ၀ င်မှုတွေကိုအားပေးတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးလူတွေကိုတကယ်နားထောင်ချင်တဲ့သူကိုကူညီဖို့ပါ။ ဒီဆန်းသစ်သောနည်းပညာနှင့်အလွန်ကောင်းသည့်အကြောင်းအရာများကိုဝေမျှပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ”
“ မင်းရဲ့စွမ်းအင်မြင့်မားမှုနဲ့အကောင်းမြင်မှုတွေကြောင့်ငါစိတ်စွဲမှတ်သွားတယ်။ ငါဆက်သွယ်မှုရနှင့်သင်၏အကြံဥာဏ်ကိုရဖို့ကိုချစ်၏။ "
“ တကယ့်ကိုအမှတ်ရစရာ၊ အမှတ်ရစရာ၊
"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါလုပ်မယ် ယနေ့ကြီးစွာသောတင်ဆက်မှု။ မင်းကလှုပ်ခါလိုက်တာ !! မင်းစာအုပ်ကိုငါ ၀ မ်းသာစွာဖတ်ပြမယ်။ ”
သင်၏တင်ဆက်မှုနှင့်အခြားအရင်းအမြစ်များကိုမျှဝေလိုသည့်သင်၏စိတ်ဆန္ဒကိုများစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြသပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့စီးပွားရေးကိုဖန်တီးဖို့စိတ်မ ၀ င်စားပါဘူး။
“ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်း @ @ & ထူးခြားသောတင်ဆက်မှု! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။"
“ အိုးမိန်းမတို့၊ ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဘဝရဲ့နိယာမတရား” ကိုပြန်လည်အလေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
"သင်ငါ့ကို Cheryl လှုံ့ဆော်!
“ ကောင်းတယ်၊ သင်၏တင်ဆက်မှုအတွင်းဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုပြောဆိုခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီ
"ဂရိတ်အပြန်အလှန် session တစ်ခု။ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လက်တွေ့ဖြစ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် အလွ။ "
“ အဲဒါကိုသဘောကျတယ် ကျိန်းသေညီလာခံ၏မီးမောင်းထိုးပြ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!"
“ အလွန်အရေးကြီးတဲ့မိန့်ခွန်း !!! ငါစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် ပုံမှန်ဟာသ၊ မျှတမှု၊ ဉာဏ်ပညာ၊ အခုအချိန်ထိအကောင်းဆုံးတစ်ခုပါ။ ”
"ယခုအချိန်အထိအကောင်းဆုံး session ကို! သန်စွမ်းပြီးစိတ်ဓာတ်တက်ကြွဖွယ်”
“ Cheryl သည်တိုရွန်တို၌ပြုလုပ်ခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကင်းမဲ့သောကျွမ်းကျင်မှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွင့်စကားပြောခန်းဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးစကားပြောဆိုမှုအရ Cheryl သည်အနာဂတ်အလုပ်အတွက်အလွန်ကျွမ်းကျင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်ရပ်၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုနားလည်ရန်အချိန်ယူသည်ကိုထင်ရှားခဲ့သည်။ သူမ၏တင်ဆက်မှုသည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသော၊ အလယ်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသားများ၊ ပညာရှင်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အစိုးရအရာရှိများပါ ၀ င်သည်။ လူတိုင်း Cheryl ၏မိန့်ခွန်းမှတစ်ခုခုယူပြီးသူတို့၏တုံ့ပြန်ချက်မှတ်ချက်များတွင်တင်ဆက်မှု၏အားသာချက်ကိုမှတ်ချက်ပေးကြသည်။ အနာဂတ်ကာလ၌ Cheryl နှင့်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုကြိုဆိုပါသည်။
Namir Anani - ICTC ဥက္ကPresident္ဌနှင့်စီအီးအို
“ မင်းရဲ့အဓိကမိန့်ခွန်းကိုကျွန်တော်တကယ်သဘောကျခဲ့တယ်။ ငါချက်ချင်းဖမ်းဆီးရမိနှင့်အပြန်အလှန်ချစ်သောသူဖြစ်ခဲ့သည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာအလုပ်နှင့်စီးပွားရေးအနာဂတ်အတွက်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကသင်၏တင်ဆက်မှုကိုမမေ့နိုင်စရာပင်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းရဲ့ပါ ၀ င်ပတ်သက်မဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်စီမံကိန်းများအကြောင်းသိပါရစေ။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်နည်းပညာအကြောင်းသင်ပိုမိုပြောတာကိုကြားချင်ပါတယ်။
၉ တန်း Guest ည့်သည် - ICTC တီထွင်မှုထိပ်သီးအစည်းအဝေး
“ Cheryl ဟာနှစ်ပတ်လည် AGA အမျိုးသားခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းအတွက်အဖွင့်ဟောပြောချက်ဖြစ်ပြီးသူမဟာထူးခြားပါတယ်။
သူမသည်အဓိကအနုပညာခေါင်းစဉ်ဖြစ်သော“ ပြောင်းလဲခြင်းခေါင်းဆောင်မှုအနုပညာ - မည်သို့ ၀ တ်စား ၀ တ်စားဆင်ယင်နည်းစနစ်” ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသောသူမ၏သတင်းစကားသည်အမှန်တကယ်အချိန်မီပြီးတက်ရောက်သူများအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ထံမှ Cheryl ၏တက်ကြွသောဖြန့်ဝေမှုပုံစံ၊ မဲရုံနှင့်မေးခွန်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်သူမပရိသတ်အားသိရန်နှင့်သူ၏တင်ဆက်မှုကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သူပေးပို့ခဲ့သည့်စစ်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မှအလွန်ကောင်းသည့်တုံ့ပြန်ချက်များရရှိခဲ့သည်။ Cheryl ၏အဖွင့်အမှာစကားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ဖရင့်ကိုအစွမ်းကုန်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည် - ဗီဒီယိုများနှင့်ဂီတကိုလူများအားလုံးအားတစ်နေ့လုံးစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။
“ Cheryl Cran ဟာနှစ်ပတ်လည်ခေါင်းဆောင်မှုအခမ်းအနားအတွက်အဓိကပြောသူဖြစ်ပြီးသူမထူးချွန်သူတစ် ဦး ပါ။ Cheryl ၏အနာဂတ်အနာဂါတ်နှင့်ကုမ္ပဏီများရှေ့တွင်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်ထူးခြားသောရှုထောင့်ကကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အတွက်ကြီးမားသောတန်ဖိုးကိုရရှိစေခဲ့သည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကျွန်ုပ်အားကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည့်အရာများအပေါ်မည်သို့မည်သို့အသုံးချရမည်စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်များကမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်ဆန်။ အရှိန်အဟုန်မြန်သော Cheryl ၏ပို့ဆောင်မှုစတိုင်ကိုလက်နှစ်ချောင်းပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Cheryl ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညနေခင်းလူမှုရေးဘို့ငါတို့နှင့်အတူပူးပေါင်းကြောင်းအမှန်တကယ်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီ၏စီအီးအိုအနေဖြင့်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုကိုသူမသူ၏အဓိကမှတ်စုတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အဖြစ်အပျက်မတိုင်မီစစ်တမ်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်းခြားသိမြင်မှုရှိသောခေါင်းဆောင်များနှင့်အမှန်တကယ်ထိတွေ့ခဲ့သောစစ်မှန်သောအချိန်မဲပေးခြင်းနှင့်စာပို့ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ Cheryl ကသူမ၏အနာဂတ်နှင့်အနာဂတ်အကြောင်းများကိုသာပြောကြားခြင်းမဟုတ်ဘဲသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနောက်ထပ်အောင်မြင်မှုအဆင့်ကိုဖန်တီးရန်ပြောင်းလဲမှုခေါင်းဆောင်မှုကိရိယာများကိုပေးခဲ့သည်။
ခ Batz စီအီးအို Fike
“ Cheryl ကို JLT ကနေဒါပြည်သူ့ကဏ္ Summ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၂၀၁၈ မှာသူမရဲ့အပြောင်းအလဲပြုလုပ်သူတွေကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေးတဲ့မှတ်တမ်းအတွက်လုံလောက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ဆွေးနွေးမှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြူနီစီပယ်ပရိသတ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်၊ Cheryl ၏အစီအစဉ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အထူးသဖြင့်ကောင်းစွာကျရောက်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ကျွန်မတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကသူရဲ့တင်ပြချက်နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တဲ့အရာတွေကိုပြောနေတာကိုမရပ်တန့်နိုင်ဘူး၊ အဲဒါကလူတိုင်းကိုဆက်သွယ်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ။ ”
P. Yung စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး, Jardine Lloyd Thompson ကနေဒါ Inc.
"Cheryl ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည် TLMI ညီလာခံအဘို့ငါတို့နိဂုံးချုပ်ပြောခဲ့တယ်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နှင့်အတူအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည် - သူမ၏အဓိကကျသည့်အချက်ကထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးပြီးအနာဂတ်အလုပ်အပေါ်သုတေသနပြုမှုသည်ဤစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ Cheryl သည်အထူး touc ည့်ခံပွဲများဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ it ည့်ဝတ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်၏ညနေခင်းမတိုင်မီကထပ်မံဖြည့်စွက်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးပြီးမဟာဗျူဟာကျသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည့်အခါသူမကကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဝင်များ၏အောင်မြင်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ စာပို့ခြင်းနှင့်မဲရုံများအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်ထူးခြား။ ပရိသတ်ကိုအပြုသဘောပါ ၀ င်မှုအပိုထပ်ထည့်သည်။ ကျနော်တို့ Cheryl နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ငါတို့အဖွဲ့လည်းသူ့ကိုချစ်တယ်။
D.Muenzer သမ္မတ TLMI
“ Cheryl Cran ဟာ 2018 CSU အဆောက်အအုံများစီမံခန့်ခွဲမှုညီလာခံမှာငါတို့ရဲ့အဖွင့်စကားပြောခန်းဖြစ်ပြီးသူမထူးချွန်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲ၊ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာသူမ၏သတင်းစကားသည်ကျွန်ုပ်တို့အုပ်စုကြားရန်လိုအပ်သည့်အတိအကျဖြစ်သည်။ သင်ဟာဗိသုကာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူတစ်ယောက်သိတဲ့အခါအနာဂတ်ကိုမကြောက်ပါနဲ့။ အသင်းအားလုံး၏အောင်မြင်မှုကိုပြန်လည်ရယူရန်နှင့်ချက်ချင်းလျှောက်ထားရန်အသုံးချနိုင်သောကိရိယာများကိုသူမမျှဝေခဲ့သည်။ Cheryl သည်ပရိသတ်နှင့်မဲရုံများတွင်စာပို့ခြင်းအတွက်အလွန်အသုံး ၀ င်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်သူမနှင့်၎င်းကိရိယာများကို သုံး၍ တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သည်။ Cheryl သည်စိန်ခေါ်မှုများအပါအ ၀ င်စာသားမေးခွန်းအားလုံးကိုလိုလိုလားလားအဖြေရှာပုံကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ စာပို့ခြင်းဖြင့်မေးခွန်းများသည်လူထု၏ပူပန်မှုများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ တက်ရောက်သူအတော်များများက text နှင့် Twitter မှတစ်ဆင့် Cheryl ၏တက်ကြွသောအဖွင့်အမိန့်သည်အလွန်အောင်မြင်သောနှစ်ရက်ကြာကွန်ဖရင့်ကိုသတ်မှတ်ပေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
N.Freelander-Paice Capital Programs ၏ဒါရိုက်တာ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်၊ အဓိပတိရုံး
Cheryl Cran သည်“ အမှန်တကယ်သဘောတူညီချက်” အမှန်ဖြစ်သည်။
Cheryl Cran ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေသောစပီကာများ၊ Cheryl သည်သူမဘဝဘ ၀ အတွေ့အကြုံများကိုယနေ့စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အခြေအနေများအားပြောပြစဉ်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သော၊ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့လုပ်သားအင်အားအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့ Fortune 100 ကုမ္ပဏီကိုသူမအားအကြံပေးရန်ကျွန်ုပ်တွင်သံသယမရှိပါ။
သူတို့ဟာ Cheryl ၏အကြံဥာဏ်များနှင့်အခြားသူများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိရန်မျှော်လင့်ချက်နှင့်မည်သို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဆိုသောအကြံဥာဏ်များကိုလိုက်နာပါကပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ”
C. Lee သမ္မတ၊ ရေသွန်းဝန်ထမ်းအသင်း
“ Cheryl Cran ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအစည်းအဝေးမှာအဓိကပြောခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အဓိကခေါင်းစဉ် - ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ကိုရေးဆွဲခြင်း - အပြောင်းအလဲအတွက် ဦး ဆောင်ခြင်း။
Cheryl ၏အနာဂတ်အလုပ်နှင့်ခေါင်းဆောင်များပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အပြောင်းအလဲများနှင့်ပတ်သက်သည့်သုတေသနသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည်။ သူမ၏သုတေသနနှင့်တက်ကြွသောဖြန့်ဝေမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်းခြားသိမြင်မှုရှိသောခေါင်းဆောင်များအတွက်ကြီးမားသောတန်ဖိုးကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည်မေးခွန်းများကိုစာပို့ခြင်းနှင့်သူမ၏အဓိကမှတ်စုတွင် Cheryl ပါ ၀ င်သည့်မဲဆန္ဒများတွင်ပါ ၀ င်စွာတက်ကြွစွာပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူလှုံ့ဆော်မှုသည် Cheryl ၏အဓိကကျသောအချက်များကိုယူဆောင်လာသည့်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်ရပ်သည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး Cheryl ၏အဓိကကျသောအချက်ကိုခြုံငုံအောင်မြင်မှု၏ထင်ရှားသောအမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ”
ခ Murao ဒုတိယအကဲဖြတ်, ဘီစီအကဲဖြတ်
“ Cheryl Cran သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်မှုကွန်ဖရင့်၌အဓိကပြောခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူမ၏ခေါင်းဆောင်မှုခေါင်းစဉ်မှာ“ ပြောင်းလဲခြင်းခေါင်းဆောင်မှုအနုပညာ - ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ” ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့နှင့်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
Rubicon တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးထွားလာနေပြီး၊ ပြည်တွင်းပြောင်းလဲမှုနှင့်ပြင်ပမှပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အတွက် Cheryl ၏သုတေသနနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။
အသုံးဝင်သောအကြောင်းအရာများ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်သောအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူစာသားများ၊ မဲရုံများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ပြီးအဖွဲ့လိုက်စာသားမေးခွန်းများကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
Cheryl သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့အားပြောင်းလဲမှု၊ စီးပွားရေးနှင့်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အနာဂတ်အောင်မြင်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ နည်းလမ်းအသစ်များကိုစဉ်းစားရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ”
R. စောင့်ရှောက်မှု COO, Rubicon ဆေးဆိုင်များ
“ Cheryl Cran ဟာမြူနီစီပယ်အိုင်တီပညာရှင်တွေအတွက်မကြာသေးခင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ MISA BC ကွန်ဖရင့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဟောပြောသူဖြစ်တယ်။
Cheryl ၏အဓိကကျသောအကြောင်းအရင်းဖြင့်ပစ္စည်းများစွာကိုကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားခဲ့သည် - ပါ ၀ င်မှု၊ သုတေသနနှင့်အတွေးအခေါ်များ၏မျှတသောမျှတမှုသည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူရှိ၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ရောက်သူများ၏တုံ့ပြန်ချက်များသည်ထူးခြား။ Cheryl နှင့်သူမအားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အဖွဲ့နှင့်ပါ ၀ င်ရန်မဲရုံများသို့မေးခွန်းများပေးပို့နိုင်သည့်အတွက်သူတို့ကျေးဇူးတင်ကြသည်။
တက်ရောက်သူများသည် Cheryl ၏အဓိကကျသောခံစားချက်မှထွက်ခွာသွားပြီးစိတ်ကူးများနှင့်အရေးယူမှုများကိုအလုပ်ခွင်သို့ပြန်သွားပြီးအောင်မြင်မှုရရန်ချက်ချင်းနေရာယူထားကြသည်။
Cheryl ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်! "
C. Crabtree ညီလာခံကော်မတီ၊ ဘီစီစီစီမြူနီစီပယ်သတင်းအချက်အလက်စနစ်အသင်း (MISA-BC)
Cheryl Cran သည်အနာဂတ်၏အနာဂတ်ပြောင်းလဲမှုလောကတွင်သင်၏အနာဂတ်ကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ရန်အတွက်အနာဂတ်ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ငါကျောင်းမှာငါ့အနှစ်တာကာလအတွင်းတကယ်ကိုကြီးသောနည်းပြအချို့ရှိသည်။ သင်ရလဒ်ကိုပေါင်းစည်းညီညွတ်သောခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်အတူတကွအလုပ်လုပ်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အုပ်စုတစ်စုအတွက်ရလဒ်ကိုမြင်သောအခါကြီးစွာသောနည်းပြသိသာဖြစ်ကြသည်။ အားကစား၊ တေးဂီတ၊ ကခုန်ခြင်း - အားလုံးတွင်ကောင်းမွန်သောနည်းပြများအတွက်ဆုများနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ထမ်းများအတွက်ကျွန်ုပ်လုပ်ပေးသည့်နည်းပြသည်လိဂ်နည်းနည်းသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလိုချင်ပါကကျွန်ုပ်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပြတစ် ဦး လိုအပ်ကြောင်းသိသည်။ Cheryl Cran သည် MyMutual ၏ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့အတွက်ဖြစ်သည်။ နှစ်ပတ်လည်ပွဲစားနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာသူကအဓိကပြောသူဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုခံရတဲ့အခါ Cheryl Cran ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာငါတို့ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တယ်။ Cheryl စောစောစီးစီးလာ, တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့် Leading ပြောင်းလဲမှုအပေါ်စိတ်ကူးသောအဓိကပြောခဲ့သည်။ Cheryl ထိပ်တန်းထစ် keynote စပီကာဖြစ်ပါတယ်။ ငါ Cheryl ငါသိသောဒုတိယနည်းလမ်းအလုပ်အမှုဆောင်နည်းပြအဖြစ်။ သူမသည်စီအီးအိုအဖြစ်ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုအတွက်နည်းပြနှင့်လမ်းညွှန်သူဖြစ်သည်။ ယခုမှာသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့အတွက်ထိုနည်းပြဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ကတာ ၀ န်ယူသည် NextMapping အွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း Cheryl Cran ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သင်တန်းများသည်အွန်လိုင်းတွင်ရရှိပြီးနည်းပြဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုတွင်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းအတွက်နည်းပြတစ် ဦး ၏အကူအညီဖြင့်လက်တွေ့ဘ ၀ အခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနေသည့်အရာများကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ Cheryl ၏နည်းပြများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကူညီပေးသောသီးခြားနည်းလမ်းများမှာ -
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းနှင့်ဖောက်သည်တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်နှင့်မျှော်မှန်းချက်အပေါ်ရှင်းလင်းခြင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအနာဂတ်တွင်မောင်းနှင်ရန်အဖွဲ့တွင် 'မှန်ကန်သောလူများ' ရှိရန်လမ်းညွှန်
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ ၀ င်များကိုငှားရမ်းခြင်း၊ နည်းပြခြင်းနှင့်ကြီးပွားခြင်းများကိုကူညီရန်အတွက်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်တိကျသောအရင်းအမြစ်များ
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုတာ ၀ န်ခံမှုရှိစေရန်ကျွမ်းကျင်မှုများတိုးမြှင့်ခြင်း၊
ဗျူဟာကျစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်၊ မျှဝေသောခေါင်းဆောင်မှုယဉ်ကျေးမှုကိုဖန်တီးရန်နှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏ပါ ၀ င်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပါ
V. Fehr - စီအီးအို ချစ်သူ အာမခံ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Cheryl သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ဝန်ထမ်းများ၊ သတ်မှတ်ထားသောနေထိုင်သူများ၊ စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အခြားမြို့၏သက်ဆိုင်သူများအတွက်နှစ်စဉ် ၁.၅ ရက်ကြာဆုတ်ခွာမှုကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်အပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက်ယခုနှစ်တွင်ပင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုတက်ရောက်သူများကပြောခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Cheryl ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီမှု၊ သူမပါဝင်သူများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပြင်ဆင်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Cheryl သည် speakers ည့်သည်ပီတစ် ဦး ချင်းစီအားအစီအစဉ်၏အစီအစဉ်မတိုင်မီကြိုတင်စကားပြောခဲ့ပြီးအစီအစဉ်၏စီးဆင်းမှုကိုသေချာစေရန်၊ အလုံးစုံဆုတ်ခွာရာတွင်အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်သေချာစေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်ပုဒ်မှာ 'NextMapping' တီထွင်မှု၊ နည်းပညာ၊ ဦး ဆောင်မှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုစသည့်အနာဂတ်၏အနာဂတ်ဖြစ်သည်။ သူမသည်ဆုတ်ခွာနေတလျှောက်လုံးသူမ၏အဓိကအချက်မှာဖွင့်လှစ်, တစ်နေ့၏အနီးကပ်နှင့်ဒုတိယနေ့၏အနီးကပ်ပါဝင်သည်။ Cheryl သည်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများအပြင်မျှဝေထားသောအတွေးအခေါ်များကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးပေးသောသက်ဆိုင်ရာနှင့်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောချဉ်းကပ်မှုယူဆောင်ရန်ထူးခြားသောစွမ်းရည်ရှိသည်။ သူမ၏ပွင့်လင်းသောသော့ချက်၌သူသည်နည်းပညာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်လူများ၏အပြောင်းအလဲမြန်ဆန်သောအရှိန်အဟုန်နှင့်မည်သို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရမည်စသည့်အနာဂတ်အနာဂတ်အတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောလေသံကိုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ပထမနေ့တွင်သူမနိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် NextMapping ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အနာဂတ်နှင့်အဖွဲ့များနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်အနာဂတ်အတွက်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုအာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ အစီအစဉ်တွင်ဟောပြောသူများသည်စမတ်မြို့ကြီးများ၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ တီထွင်ဆန်းသစ်သောတွေးခေါ်မှု၊ သမိုင်းဝင်ဒီဂျစ်တယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ ၂ ရက်မြောက်သောနေ့တွင် Cheryl သည်တစ်နေ့ခွဲတစ်လုံးလုံးပြန်လည်ရွတ်ဆိုခဲ့ပြီးပြောသူတစ် ဦး ချင်း၏သော့ချက်စာလုံးများကိုသူမ၏နိဂုံးချုပ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ Cheryl နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏မြို့အသင်းအတွင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်းများမှကျွန်ုပ်တို့အကျိုးရရှိခဲ့သည်။ Cheryl သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ပတ်လည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအာရုံစိုက်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်မြင်ပြီးသူမနှင့်အတူအနာဂတ်၌အကြိမ်များစွာအတူလက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဒဗလျူ Foeman - စီးတီးစာရေး Coral Gables မြို့တော်
“ Cheryl သည် UVA ပညာရှိစီးပွားရေးဖိုရမ်၌ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဟောပြောသူဖြစ်ပြီး“ အနာဂတ်၏အနာဂတ်ယခု - သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား” ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်မှတုံ့ပြန်မှုတွင်“ အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာအမြင်” ကဲ့သို့သောမှတ်ချက်များပါ ၀ င်သည်။ “ လက်တွေ့ကျမှုရောနှောမှုကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုဆန်းသစ်စေရန်ကူညီရန်တွန်းအားပေးခြင်း” အနာဂတ်အောင်မြင်မှု”“ အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်သောသုတေသနနှင့်စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ၊ ပညာရေးနှင့်စီးပွားရေးနှစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိခြင်း”“ Cheryl Cran မှုတ်သွင်းသည်” ကျွန်ုပ်တို့သည် Cheryl အားအလုပ်၏အနာဂတ်၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုကိုပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်ရန်ပြန်လည်ကျောခိုင်းလိမ့်မည်။
ပညာရှိမှာခ Joyce တက္ကသိုလ်ဗာဂျီးနီးယား
“ Cheryl Cran ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ISBN ကွန်ဖရင့်မှာထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Cheryl ၏ပါ ၀ င်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ C-Level အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အကြံဥာဏ်များအပြည့်အ ၀ ရှိသောကွန်ဖရင့်တစ်ခုသို့ ၄ င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းကိုရှေ့သို့တက်ရန်ကူညီခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အလွန်ပိုင်းခြားသိမြင်မှု ရှိ၍ အလှပြင်ဆိုင်နှင့် spa လုပ်ငန်းအပြင်ဘက်ရှိဟောပြောသူများအားဝေဖန်နိုင်သည်။ သို့သော် Cheryl ၏အဓိကလှုပ်ရှားမှုမှာငွေနှင့်မှန်ကန်သည်။ Cheryl ကသူမရဲ့အဓိကကျတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စုအတွက်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်သည်၊ အနာဂတ်အလုပ်ယခု - သင်၏အလှပြင်ဆိုင်သည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ နှင့်သူမ၏သတင်းစကားသည်ပြီးပြည့်စုံသောသုတေသနမျှတမှု၊ သက်ဆိုင်သောအတွေးအခေါ်များ၊ အနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုမျှော်ကြည့်ခြင်းအပြင်အနာဂတ်နှောင့်ယှက်ခြင်းများအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိကသော့ချက်စာချုပ်များနှင့်မတူဘဲ Cheryl သည်ဘလော့ဂ်ဗီဒီယိုအပါအ ၀ င်ကြော်ငြာတိုများကိုတက်ကြွစွာကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးတက်ရောက်သူများအားစစ်တမ်းကောက်ယူရန်နှင့်မဲရုံနှင့်တိုက်ရိုက်မဲပေးမှုပြုလုပ်ရန်နှင့်သူတုို့၏အဓိကမှတ်စုတွင်သူတို့၏တုန့်ပြန်မှုများကိုပါထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထိပ်တန်းအခွက်တဆယ်ကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့် Cheryl သည်အခန်းတစ်ခန်းတည်းသာရပ်တည်ရန်ဆွေးနွေးခြင်းကို Cheryl ကကူညီပေးခဲ့သည်။ သူမကိုအခြားသူများအားအကြံပေးရန်တွန့်ဆုတ်မည်မဟုတ်။ ”
V. တိတ်အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ International Salon Spa စီးပွားရေးကွန်ယက်
Cheryl Cran သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Calgary Stampede Leadership ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်အဓိကဟောပြောသူနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ကူညီပံ့ပိုးသူဖြစ်သည်။ သူမ၏အဓိကမှတ်ချက် - အနာဂတ်အဆင်သင့်အဖွဲ့များ - ခေတ်မီသွက်လက်သောဖန်တီးနည်း၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုနှင့်အနာဂတ်အဆင်သင့်အဖွဲ့များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးခေါင်းဆောင်များအတွက်ထူးခြား။ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်သူခေါင်းဆောင်များသည် Cheryl ကိုအဓိကကျသည့်စာတမ်းတွင်စာပို့ကြပြီးသူမ၏အသေးစိတ်ရှင်းပြချက်နှင့်စစ်မှန်သောတုန့်ပြန်မှုများကိုအလွန်ချီးမွမ်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူများခေါင်းဆောင်များကအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှား။ သူတို့လေ့လာသိရှိခဲ့ရာများကိုသူတို့၏အခန်းကဏ္ to များတွင်အသုံးချလိုကြသည်။ Cheryl သည်သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရာတွင်သေချာစေရန်အချိန်နှင့်ဂရုစိုက်မှုများကိုတက်ရောက်သူများအားသူမအားကြိုတင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၊ အဓိကကျသည့်ကာလအတွင်းအပြန်အလှန်မဲဆန္ဒပေးခြင်းနှင့်မေးခွန်းများ၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများအပါအ ၀ င်အလွန်တန်ဖိုးထားခဲ့သည်။ Cheryl ကနည်းပညာကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရာတွင်လူကိုဆွဲဆောင်ခြင်းအားဖြင့် 'ငါမှငါတို့' ဆီသို့သွားရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
Cheryl သည်စီးပွားရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောအနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိစေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုကိုမည်သို့မြှင့်တင်နိုင်ကြောင်းတီထွင်မှုအကြံဥာဏ်များပေးခဲ့သည်။ Cheryl ၏ချဉ်းကပ်မှုသည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်းနှင့်မြင့်မားသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်းခြားသိမြင်မှုရှိသောခေါင်းဆောင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ “
D. Bodnaryk - ဒါရိုက်တာ၊ ပြည်သူ့ ၀ န်ဆောင်မှု
Calgary ပြပွဲနှင့် Stampede Ltd.
၀ န်ထမ်းရာပေါင်းများစွာပါ ၀ င်သည့် ၀ န်ထမ်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုံးအတွက် Cheryl Cran ကိုဆွဲဆောင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။ Cheryl ကအနာဂတ်အလုပ်ကိုယခုတင်ပြသည် - ဒီနေ့တာ ၀ န်အတွက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ သူမသည်သော့ချက်လိပ်စာသာမကဘဲတက်ရောက်သူများ၏အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်ဟူသောအဓိပ္ပာယ် / အဓိပ္ပာယ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ထိုနေ့၏နိဂုံးချုပ်အကျဉ်းချုပ်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏နိဂုံးချုပ်အခမ်းအနားတွင်ထိုနေ့၏လှုပ်ရှားမှုအားလုံး၏ရှုထောင့်များကိုထည့်သွင်းနိုင်စွမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားသည် - သူမ၏ထူးခြား။ အလိုလိုသိမှုသည်အုပ်စု၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာထူးခြားမှုအပေါ်တွင်မူတည်နေသည်။ ထိုနေ့အတွက်တက်ရောက်သူများက Cheryl ၏အဓိကပို့ဆောင်မှုကိုအားရှိ၊ လူတစ်ယောက်ကသူမမှာစွမ်းအင်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောပြတယ်၊ အခန်းထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုစိတ် ၀ င်စားဖို့လွယ်တယ်။ Cheryl ၏သော့ချက်နှင့်ပိတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်နေ့တာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏အဓိကကျသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အောင်မြင်မှုကိုများစွာဖြည့်စွက်ခဲ့သည် သူမနှင့်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်စဉ်းစားသင့်သည်။ Cheryl Cran သည်အပြောင်းအလဲနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုစူးစမ်းလိုသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဟောပြောသူအဖြစ်အလွန်အမင်းအကြံပြုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Cheryl မင်းမှာစကားလုံးတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိလို့ပါ။
အယ်လ် Masse အဆင့်မြင့်မြေပြင်
Cheryl သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်လုံးဝပြီးပြည့်စုံသောကိုက်ညီမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိပ်တန်းအဆင့်တွင်ရှိနေခြင်းအပေါ်ဂုဏ်ယူ ၀ င်စားကြသော credit union union ခေါင်းဆောင်များနှင့် Cheryl က၎င်းတို့အားတီထွင်ဖန်တီးမှုပိုမိုစဉ်းစားရန်၊ သူတို့၏တီထွင်ဆန်းသစ်မှုချဉ်းကပ်နည်းကိုတိုးချဲ့ရန်စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောအဖြစ်မှန်များကို အခြေခံ၍ အနာဂတ်မဟာဗျူဟာများကိုတည်ဆောက်ပါ။ Cheryl Cran ကိုအနာဂတ်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်အဓိကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
J. Kile အနာဂတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးချေးငွေသမဂ္ဂအမှုဆောင်အရာရှိ MN
“ Cheryl ၏အနာဂတ်အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောတင်ပြချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်အပျက်ကိုအစပြုရန်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအချိန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ guests ည့်သည်များသည်ပရိသတ်နှင့်ပါ ၀ င်မှုနှင့်လက်တွေ့ကျသည့်အဖွဲ့များသို့ချက်ချင်းပြန်ပို့နိုင်သည့်သက်သေအထောက်အထားအခြေခံသည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအထူးနှစ်သက်သည်။ သူမသည်ပရိသတ် ၃၅၀ ခန့်ခန့်အပ်ထားသောပရိသတ်နှင့်ပါရမီရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပညာရှင်များအတွက်ပရိသတ်ကိုဥယျာဉ်မှနှင်ထုတ်ခဲ့သည်။
ဂျေ Palm, မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ TeamKC: Life + Talent
“ နှစ်ပတ်လည် ၀ န်ထမ်းအဖြစ်အပျက်မှာ Cheryl ဟာအနာဂတ်ရဲ့အနာဂတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သက်ရောက်မှုများအကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပြီးအချက်အချာကျသောမိန့်ခွန်းကိုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမကကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှုရှိစေရန်သူမ၏လိပ်စာကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ Cheryl ၏ဟောပြောချက်သည်စေ့ဆော်မှုရှိပြီးအပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ဖြင့်ပြောကြားခဲ့သည်။ ”
"Cheryl ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ခေါင်းဆောင်မှုညီလာခံမှာ guest ည့်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ခဲ့သည် - သူမပြောင်းလဲမှုခေါင်းဆောင်မှုနှင့်စုဆောင်းမှုအခွက်တဆယ်အပေါ်တင်ပြခဲ့သည်။ မြင့်မားသောအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Cheryl ၏ချဉ်းကပ်မှု၊ ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်မှု၊ သူတင်ပြသည့်ပုံစံများသည်ဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီဖြစ်သည်။ ရလဒ်ကတော့အပြောင်းအလဲသံသရာအကြောင်းပိုမိုသိရှိလို။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်များအနေနှင့် ဆက်လက်၍ ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်လွယ်အောင်မည်သို့ပိုကောင်းအောင်အထောက်အကူပြုမည်ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာရှုမြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
WB၊ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု BASF
“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့က Cheryl 10 ကို 10 ထဲကနေအဓိကပြောသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ဖရင့်၌ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောပြောသူဖြစ်သည်။ သူကကျွန်မတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ထက်အများကြီးပိုတယ်။
စီအီးအို အမျိုးသား Agra စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသင်း
"Cheryl ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးမြို့တလျှောက်လုံးဆုတ်ခွာနေကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆုတ်ခွာနေဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုပြောင်းလဲမှု၏ကျယ်ပြန့်သောအကြောင်းအရာများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ဆုတ်ခွာရန်ဟောပြောသူများကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ၄ င်းတို့သည်အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌သာမကပြင်ပမှဖောက်သည်များဖြစ်သည်။ Cheryl ၏ကျွမ်းကျင်မှုသည်ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းနှင့်နေ့တစ်ဝက်ကြာဆုတ်ခွာနေစဉ်အရာအားလုံးတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေစဉ်အတွင်း Cheryl သည်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ချင်းစီအားသူတို့၏အနာဂတ်နှင့်အနာဂတ်အတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့အတူတကွချည်နှောင်ခြင်းတွင်ကျွမ်းကျင်ခဲ့သည်။
ဒဗလျူ Foeman Coral Gables မြို့တော်
“ ငါ Cheryl နှင့်အကြိမ်များစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီကိုသူမဥယျာဉ်ထဲကခေါက်သည်။ သူမသည်သင်လိုအပ်တာနှင့်သင်၏ဖြစ်ရပ်နှင့်အတူအောင်မြင်ရန်သင်ကြိုးစားနေသည့်အရာတို့ကိုနားထောင်သည်။ ပရိသတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အမှတ်ရစရာပုံရိပ်များနှင့်လက်တွေ့ကျသောသတင်းစကားကိုသူမသယ်ဆောင်သည်။ Cheryl ၏တင်ပြချက်များကိုအမြဲတမ်းအလွန်အမင်းမှတ်သားထားပါသည်။ သူမသည်အစစ်အမှန်၊ သူမသည်အချိန်တိုင်းကယ်တင်တတ်၏။
အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် CREW ကွန်ယက်ဖောင်ဒေးရှင်း
“ Cheryl ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း 2017 ကနေဒါတက္ကသိုလ်အတွက်ဆက်လက်ပညာသင်ကြားရေးညီလာခံမှာကနေဒါနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ Cheryl ၏“ ပြောင်းလဲခြင်းစီးဆင်းမှုကို ဦး ဆောင်ခြင်း” သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာပေးအဖွဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ Cheryl သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ရောက်သူများအားကြိုတင်လေ့လာထားခြင်းဖြင့်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုဖြေရှင်းရန်သူမ၏ဟောပြောချက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်များသည်ဤအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောချဉ်းကပ်မှုကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ကြသည်။ ပြောင်းလဲမှုခေါင်းဆောင်များအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်လုပ်ငန်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်ဆက်လက်ပညာသင်ကြားနေသောကျောင်းသားများကိုမည်သို့ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်ဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုရှယ်ရယ်၏အဓိကကျသည့်အချက်ကစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ ပြောင်းလဲမှုသံသရာနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အဆင့်လေးဆင့်တွင်ရှိသည့် Cheryl ၏မော်ဒယ်များမှာကျွန်ုပ်တို့အသုံးချနိုင်သောကိရိယာများဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ဖရင့်ကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်စေနိုင်အောင်သူရဲ့ပူးပေါင်းချဉ်းကပ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားခဲ့ပါတယ်။
တစ်သက်တာသင်ယူမှုဌာနမှူး Simon Fraser University က
“ Cheryl Cran ဟာအတ္တလန်တာနဲ့ချီကာဂိုမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 2017 လုပ်သားအတွေ့အကြုံခရီးစဉ်အတွက်နိဂုံးချုပ်ပြောခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူမထူးခြားပါတယ်။ နေ့ကိုပိတ်ရန်နှင့်တက်ရောက်သူများအားအရေးယူရန်လှုံ့ဆော်ရန်ကြီးမားသောစွမ်းအင်ရှိသည်။ Cheryl ၏အနာဂတ်သုတေသနအလုပ်သည်ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီးရန်အတွက်အလုပ်သမားအတွေ့အကြုံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ သူမသည်ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်အနာဂတ်တွင်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်အကြံဥာဏ်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးခဲ့သည်။ တက်ရောက်သူများ၏တုံ့ပြန်ချက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး Cheryl ကသူတို့ကိုမည်သို့တွေးခေါ်ခဲ့သည်ကိုသူတို့နှစ်သက်ကြသည်။ Cheryl သည်စစ်မှန်သောအသင်းကစားသမားဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူမပါ ၀ င်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့မကြာသေးမီကနှစ်စဉ်စီမံကိန်း World / Business Analyst ညီလာခံမှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ် Cheryl Cran ဟာအနာဂတ်လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ခဲ့ပြီးသူမကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ တက်ရောက်သူများက Cheryl ကိုထိပ်တန်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့“ အနာဂတ်အလုပ်သည်ယခု - အနာဂတ်အတွက်အစွန်းရောက်ပြောင်းလဲမှု ၅ ခု” ၏အဓိကမှတ်ချက်ချသူတစ်ယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ သူမတက်ရောက်သူများထံမှစစ်တမ်းကောက်ယူထားသည့်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။ အဓိကကျသည့်စာတမ်းတွင်ပါ ၀ င်သူများအတွက်ချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုပေးခဲ့သည်။ တက်ကြွလှုပ်ရှားသောစွမ်းအင်၊ အတွေးအခေါ်ခေါင်းဆောင်မှု၊ အစစ်အမှန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများသည်ပျော်စရာကောင်းသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပုံစံနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်းခြားသိမြင်မှုရှိသောစီမံကိန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်စီးပွားရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ Cheryl နှင့်အတူတဖန်အလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ”
Group Event ဒါရိုက်တာ စီမံကိန်း*BusinessAnalystWorld
“ တရားဝင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဇုန်နှင့် LexisNexis Canada ကိုယ်စားတနင်္လာနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုထိပ်သီးအစည်းအဝေး၌သင်၏အဓိကတင်ပြချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောတုန့်ပြန်ချက်များနှင့်အထူးသဖြင့်သင်၏အဓိကမှတ်စုသည်အပြုသဘောဆောင်ရုံမျှသာမဟုတ်ပါ။ မင်းရဲ့တင်ဆက်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်နေ့တာပြန်လည်ရွတ်ဆိုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာစဉ်းစားရန်စဉ်းစားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ PRSM အမျိုးသားညီလာခံတွင်“ အသွင်ပြောင်းခေါင်းဆောင်မှု - ချိုးဖောက်ခြင်း Silo များ” ကျွန်ုပ်တို့တွင် Cheryl ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်းခြားသိမြင်သူတက်ရောက်သူများနှင့်ထိတွေ့မှုခံခဲ့ရသည်။ လက်လီအရောင်းလုပ်ငန်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း ၀ င် ၀ န်ထမ်းများစွာသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်များ၌မည်သို့ပူးပေါင်း၊ Cheryl ၏အစီအစဉ်သည်အနာဂတ်၏အနာဂတ်၊ လိုအပ်သောခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်စေ့ဆော်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့် Silo များကိုမည်သို့ပေါင်းကူးနိုင်မည်နှင့်ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဖန်တီးမှုယဉ်ကျေးမှုကိုတည်ဆောက်ပုံတို့အပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်သောအကြံဥာဏ်များပေးသည်။ သူမစွမ်းအင်မြင့်မားစွာနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများ၊ ရုပ်ရှင်ကားများနှင့်ဗွီဒီယိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုများသည်အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ Cheryl သည်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းကို ဦး ဆောင်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ဟူသောဥပမာများကိုပေးခဲ့သည်။ Cheryl ၏ခိုင်မာသောပါဝင်မှုနှင့်အဆင့်မြင့်သောရလဒ်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူမ၏နှစ်လယ်ပိုင်းညီလာခံတွင်သူမကိုပြန်ခေါ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ”
Professional Development ၏ဒုတိယဥက္ကဌ PRSM အသင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ပတ်လည်ဒေတာစင်တာ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအတွက် Gartner ညီလာခံကိုကျင်းပခဲ့ပြီးအနာဂတ်နှင့်အလုပ်၏အနာဂတ်နှင့်ခေါင်းဆောင်မှုကျွမ်းကျင်သူ Cheryl Cran ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်မှုလမ်းကြောင်းအဖြစ်တင်ပြရန်ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Cheryl ၏ခေါင်းဆောင်မှုခေါင်းဆောင်မှု @ ပြောင်းလဲမှုအစီအစဉ်သည်ယခုနှစ်တွင်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားပြီးတစ်ကြိမ်ထပ်မံပြည့်နှက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်းခြားသိမြင်မှုရှိသောအိုင်တီခေါင်းဆောင်များသည်မြင်သာထင်သာသောဖြေရှင်းနည်းများ၊ အတွေးအခေါ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုသူတို့ရှာဖွေနေသည်မှာသူတို့အနာဂတ်အလုပ်အတွက်သူတို့၏အလုပ်နေရာများကိုစွမ်းအား၊ Cheryl သည်လိုအပ်သည့်အရာများနှင့်အခြားအရာများကိုအတိအကျပြောကြားခဲ့သည် - သူမ၏သုတေသနနှင့်စာရင်းအင်းများ၊ ဗွီဒီယိုတွင်တင်ပြခြင်းနှင့်သူမ၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောတိုက်ရိုက်ပုံစံသည်ကျွန်ုပ်တို့အုပ်စုနှင့်ထိတွေ့မှုအမှန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ Cheryl နှင့်အတူတဖန်အလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
“ Cheryl Cran၊ အနာဂတ်အလုပ်နှင့်ပြောင်းလဲမှုခေါင်းဆောင်မှုကျွမ်းကျင်သူသည်“ အနာဂတ်၏အနာဂတ် - အပြောင်းအလဲသည်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်” ဟူသောသူ၏အဓိကမှတ်တမ်းကိုအလွန်စိတ်ကူးခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်တို့တွင်“ Cheryl သည်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိခဲ့သမျှသောအကောင်းဆုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်ခဲ့သည်” ကဲ့သို့မှတ်ချက်များရှိခဲ့သည်။ Cheryl ၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုပျော်စရာကောင်းသော၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများနှင့်အတူထူးခြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ VIP ပုဂ္ဂိုလ်များသည် Cheryl ၏“ The Art of Change Leadership - အပြောင်းအလဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲစေသောကမ္ဘာကြီးကိုမောင်းနှင်ခြင်း” စာအုပ်၏မိတ္တူတစ်စောင်စီရရှိထားပြီးသူသည်သူတို့၏အဓိကမှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်သူမမိတ္တူတစ်စောင်စီကိုလက်မှတ်ရေးထိုးစဉ်သူမပြောခဲ့သည့်အတိုင်းသူမနှင့်စကားပြောရန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ Cheryl နှင့်သူမ၏ရုံးမန်နေဂျာ Michelle တို့သည်လှုပ်ရှားမှုမတိုင်မှီ၊ AIIM 2017 တက်ရောက်သူများအတွက်အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုပေးနိုင်ရန်အတွက် Cheryl အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
G. အ Clelland, VP ဖြစ်ရပ်များ AIIM
ဇန်နဝါရီလ 2017 တွင် Puerto Vallarta ၌ကျင်းပသော GEA ညီလာခံအတွက် Cheryl သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအဓိကဟောပြောသူအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Cheryl ၏အဓိကစိုက်ပျိုးရေးအနာဂတ်မှာ NOW! စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ our တွင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများနှင့်ဖောက်သည်ဖောက်သည်များတို့၏ပရိသတ်များနှင့်အဓိကအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ သူမ၏တိုက်ရိုက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစတိုင်နှင့်အတွေးများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောသုတေသနသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုနှင့်အတော်လေးရှုပ်ထွေးသည်။ Cheryl သည်နည်းပညာနှင့်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများအားတုန့်ပြန်သောအားဖြင့်ခေါင်းဆောင်မှုအနာဂတ်နှင့်ခေါင်းဆောင်မှုမည်သို့ပြောင်းလဲနေသည်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်သည်။ သူမအနေဖြင့်မျိုးဆက်သစ်အဖွဲ့များကို ဦး ဆောင်ရန်ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးမှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်စွမ်းရည်များတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သောသူတို့၏ 'operating system' ကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်များတိုးတက်ရန်အုပ်စုအားစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ သူမ၏စုဆောင်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာသူမ၏မဟာဗျူဟာများသည်မျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ပရိသတ်အားသူတို့၏အလုပ်ခွင်သို့ပြန်သွားနိုင်ရန်သူသည် 'အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်တောင်းဆိုမှုများ' ပေးခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်ကြသည်။ Cheryl ကငါတို့အဖွဲ့နဲ့အဓိကထိခိုက်တာပဲ!”
စီအီးအို GEA လယ်ယာနည်းပညာများ USA
“ Cheryl Cran ဟာဗဟို ၁ ချေးငွေယူနီယံညီလာခံအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီးသူဟာအကြွင်းမဲ့ရွေးချယ်မှုပါ။ သူမ၏စာအုပ်အသစ်ဖြစ်သော The Art of Change Leadership ကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Credit Union ခေါင်းဆောင်များလိုအပ်သည်မှာအတိအကျဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်များစွာက၎င်းတို့သည်အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်၊ Cheryl သည်အနာဂတ်၏အလုပ်နှင့်ခေါင်းဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲသည့်ချဉ်းကပ်ပုံကိုတန်ဖိုးထားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူမ၏အဓိကကျသည့်စတိုင်သည်ပျော်စရာကောင်းသည်၊ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည်၊ အတွေးအခေါ်ကိုလှုံ့ဆော်သည်။ အများစုမှာခေါင်းဆောင်များချက်ချင်းအသုံးချနိုင်သောလက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်များဖြစ်သည်။ Cheryl ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲရဲ့အဓိကအချက်ပဲ။ ”
ဗဟို 1 ခရက်ဒစ်ယူနီယံ
“ Cheryl Cran ကိုသူမလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့အခြား Kaiser အဖွဲ့ကအရမ်းကိုထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွက်နောက်ဆုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်သူ့ကိုမကြာမီငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ Cheryl ၏သတင်းစကားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မတူကွဲပြားသောပရိသတ်များအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သူမသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ဖရင့်ကိုလှပစွာပိတ်ခဲ့သည်။ သူသည်အစီအစဉ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှအကြောင်းအရာများကိုပါ ၀ င်နိုင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့များမှလူများရင်ဆိုင်နေရသောထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ညှိနှိုင်း။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုပေးနိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏စီးပွားရေးနောက်ခံ၊ အတွေ့အကြုံ၊ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ တက်ကြွသောဖြန့်ဝေမှုတို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အားလှုံ့ဆော်မှုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ဖရင့်ကိုအဆုံးသတ်ရန်စိတ်ကူးကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်!”
VP ဖက်ဒရယ်ဝန်ထမ်းအကျိုးခံစားခွင့် Kaiser Permanente
"Cheryl Cran ဟာ Sheryl Crow မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူမဟာရော့ခ်ကြယ်ပွင့်တစ်ယောက်ပါ။ Cheryl ဟာခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့များအတွက်အစီအစဉ်များအတွက်နိဂုံးချုပ်ပြောရမည့်စကားဖြစ်သည်။ Cheryl သည်သူမနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောတစ်ဒါဇင်ကျော်သောလှုပ်ရှားမှုများတွင်သူမနှင့်အနာဂတ်အဆင်သင့်အဖွဲ့များကိုခေါင်းဆောင် ၆၀၀၀ ခန့်ကိုပေးခဲ့သည်။ သူမရဲ့အခြားတင်ဆက်သူများ၏မက်ဆေ့ခ်ျများကိုယက်လုပ်နိုင်စွမ်း၊ ဟာသ၊ ပျော်စရာ၊ စစ်မှန်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်ပေးသောအတွေးများဖြင့်အုပ်စုများကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ခြင်းဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွန်မတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်များနှင့်နီးကပ်စွာလိုအပ်သောအရာပါ။
VP ကို ​​AT & T ကတက္ကသိုလ်
“ Cheryl Cran စက်တင်ဘာလ2နှစ်ပတ်လည်ကွန်ဖရင့်အတွက် 'WOW!' ဆိုတဲ့စကားလုံးအတွက်နံနက်ခင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 2016 နေ့နေ့ရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။ Cheryl သည်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောစွမ်းအင်၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ ပရိသတ်ကစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပြီးလူမှုရေးမီဒီယာကိုသုံးပြီးသူမမေးခွန်းများကိုသူ့ကိုအဓိကမေးခွန်းတလျှောက်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ သူမကကျွန်တော်တို့ကိုရယ်မောစေပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအပြောင်းအလဲခေါင်းဆောင်တွေလားဆိုတာကြည့်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းကြည့်ခဲ့တယ်။ ပရိသတ်ကိုအပြန်အလှန်မျှတမှုကိုအလွန်စွမ်းအားကောင်းသောမော်ဒယ်များနှင့်အတူလူတို့အားပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးရန်နှင့်အနာဂတ်အလုပ်အတွက်မည်သို့အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်မည်ကိုပေးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနှစ်သက်ပါ။ လူတိုင်းကသူမရဲ့အစည်းအဝေးကိုအစွမ်းခွန်အား၊ ခွန်အားရှိခြင်းနှင့်အနာဂတ်ကိုကိုင်တွယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းများမှထွက်ခွာသွားသည်။
ဂျေ Moore က ဘီစီဘဏ္Financialာရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များအသင်း
“ Cheryl Cran သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူညီလာခံတွင်အဓိကကျသောဟောပြောသူဖြစ်ပြီးစကားလုံးတစ်လုံးဖြင့်သူသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူက“ လျင်မြန်သောနှုန်းနှင့်နည်းပညာအလုပ်ခွင်တွင် ဦး ဆောင်ပြောင်းလဲမှု” သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လူများသည်သူမ၏ပုံစံများနှင့်အတူပြောင်းလဲမှုခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်နှင့်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများဖြစ်ကြောင်းပြသသည့်အနေဖြင့်သူမအားမြန်ဆန်စွာနှင့်ချက်ချင်းပေးပို့ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများကိုအာရုံစိုက်ခြင်းသည်ဤအုပ်စုအတွက်အရေးကြီးသည်။ လုပ်ဆောင်မှုပစ္စည်းများသည်လူတိုင်းကိုအလုပ်အပေါ်ပြန်လည်ပတ်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သောပစ္စည်းများကိုပေးသည်။ Cheryl သည်သူမပြောသည့်အရာ - အဓိက၊ မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်သူမကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီးအလုပ်လုပ်ရန်လွယ်ကူကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ခင်ဗျားရဲ့ကွန်ဖရင့်အတွက် Cheryl ကိုကျွန်တော်တို့အလွန်အမင်းထောက်ခံလိမ့်မယ်။ ”
Tricia Chiama, Sr; ညှိနှိုင်းရေးမှူး၊ ပညာရေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ Insight
Cheryl Cran သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအတွက်အဓိကအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွေးနွေးပွဲ၏အဖွင့်အပိတ်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဆောင်ကျဉ်းပေးခဲ့သည်။ Cheryl ကသူမ၏အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်သောအသိအမြင်နှင့်ဗဟုသုတကိုမျှဝေခြင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲခြင်း, သူမ၏စီးပွားရေးနှင့်ပရိသတ်အတွက်သူမ၏တင်ပြချက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သည် အစည်းအဝေးတစ်လျှောက်လုံးစာတိုပေးပို့ရေး၊ ညီညွတ်မှု၊ သက်ဆိုင်မှုရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အုပ်စုအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိခြင်းများကိုသေချာစေရန်သူနှင့်သူမအနီးကပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကိုလှုံ့ဆော်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ လူတို့အားသူတို့လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောကမ္ဘာနှင့်အလုပ်ခွင်၌ချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့်အတွေးအခေါ်များကိုချန်ထားခဲ့သည်။ Cheryl ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကျတဲ့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတကယ်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပြီးအနာဂတ်မှာအောင်မြင်မှုရဖို့ငါတို့ကုမ္ပဏီကိုအတွေးအခေါ်နဲ့ကွဲပြားခြားနားစွာလုပ်ဆောင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တာကိုသူမအတွက်ပါ ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ”
Pat Kramer, စီအီးအို BDO ကနေဒါ
“ Cheryl Cran ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်စဉ် SilkRoad Conference မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဟောပြောသူဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာကျွမ်းကျင်သော HR ပရိသတ်များသည် Cheryl ၏ပုံစံနှင့်အပြောင်းအလဲခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အလုပ်၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အဖိုးတန်၊ သက်ဆိုင်ရာနှင့်အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာများကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအားဖြင့်လုံးဝနိုးကြားခဲ့ကြသည်။ Cheryl ကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအား“ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်မှု OS ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်” နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအမှန်တကယ်အချိန်မြှင့်တင်ရန်စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအပြောင်းအလဲကိုမည်သို့ ဦး ဆောင်။ စီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုနားလည်ရန်ပရိသတ်အားလိုအပ်သောအခြေအနေကိုပေးခဲ့သည်။
ဂျေ Shackleton, CEO ဖြစ်သူ SilkRoad
“ Cheryl သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ပတ်လည်ခေါင်းဆောင်များထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဟောပြောသူများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Cheryl ၏အဓိကအလုပ်၏အနာဂတ်သည်ယခုကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အတွက်အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။ ဘဏ္industryာရေးကဏ္ industry သည်အပြောင်းအလဲနှင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည် - ရှယ်ရယ်သည်ပျော်စရာကောင်းသောအချိန်တွင်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်တီထွင်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်များအတွက်သုတေသနနှင့်ကိရိယာများကိုပေးခဲ့သည် သူမ၏သတင်းစကားသည်တိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးမည့်ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အားသတိရစေခဲ့သည်။ စာရင်းအင်းများပါ ၀ င်သောဗီဒီယိုနှင့်အနာဂတ်မဟာဗျူဟာ၏ရှေ့တန်းရှေ့တွင်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများအားသူမအားပေးခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုဥပမာများကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည့်အရာနှင့်တိုးတက်မှုများကို ဆက်လက်၍ ဘာတွေဆက်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုထောက်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်းခြားသိမြင်မှုရှိသောခေါင်းဆောင်အုပ်စုသည်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရပြီး Cheryl သည်ယခင်ဟောပြောသူများ၏သော့ချက်ကျသောစကားများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ဖရင့်ကိုနိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ ”
အယ်လ် Skinner စီအီးအို First West
“ ကျွန်မတို့ဟာ Cheryl ကိုအဓိကပြောသူအဖြစ်လည်းကောင်း၊ “ စွမ်းအင်ပြည့်ဝသောနိုင်ငံများ - လုပ်ငန်းခွင်၌စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်” - တင်ဆက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကလက်ခံကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ Cheryl ၏ကြိုတင်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရသူမ၏ကိုယ်စားကျွန်ုပ်တို့စေလွှတ်ခဲ့ခြင်းကသူမအားသူမ၏အစီအစဉ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးသူမရရှိသောတုံ့ပြန်မှုများအရသူသည်အစပိုင်းမှအဆုံးအထိကြီးမားသောစွမ်းအင်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောတင်ဆက်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Cheryl ၏အနာဂတ်အလုပ်နှင့်သူ၏မဟာဗျူဟာသည်စွမ်းအင်အသုံးချခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းလဲမှုကိုမည်သို့ ဦး ဆောင်ရမည်ကိုသုတေသနပြုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ Cheryl ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ T. Tse Manager ကို, ဖြစ်ရပ်များ ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာရင်းကိုင် Chartered
“ Cheryl Cran ၏“ အနာဂတ်၏အနာဂတ် - သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား” ဟူသည့် HRIA ညီလာခံခေါင်းစဉ် 'Navigating Booms and Busts' နှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီသည်။ Cheryl သည်တက်ရောက်သူများနှင့်အမှန်တကယ်သိကျွမ်းရန်အချိန်ယူပြီးဤအထူးပြုလုပ်ထားသောနိဂုံးချုပ်မတိုင်မီပြောကြားခဲ့သည်။ Cheryl ၏အကြိုကွန်ဖရင့်စစ်တမ်းနှင့်သူမ၏နိဂုံးချုပ်ထင်မြင်ချက်များကိုသူတို့ထည့်သွင်းရန်နေ့၏တင်ဆက်မှုများကိုကြည့်ရှုရန်အစည်းအဝေးမနက်တွင်ရောက်ရှိခြင်း။ Cheryl ၏သုတေသနကိုအသုံးပြုခြင်း၊ 'ဘယ်လို' နှင့်ပျော်စရာကောင်းသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပုံစံများကိုကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်ခိုင်မာသောကိရိယာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်းခြားသိမြင်မှုရှိသောပရိသတ်ကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ သူမသည်စာမေးပွဲမေးခွန်းများမှတစ်ဆင့်အဖွဲ့နှင့်စေ့စပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Twitter hashtag သည်သူမတွေ့ဆုံချိန်နှင့်အပြီး၌ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Cheryl နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အကြွင်းမဲ့အာဏာပျော်မွေ့သည်။ "
J ကိုချပ်မန်း, CMP အယ်လ်ဘာတာ၏လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အင်စတီကျု
"Cheryl Cran ကပန်းခြံထဲကခေါက်! Cheryl သည် 1st, 2016 ၌ကျင်းပသောကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ပတ်လည်ကွန်ဖရင့်၌အဖွင့်အမှာစကားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်တစ်လျှောက်လုံးအလွန်ရယ်မောစရာအများကြီးနှင့်အတူ, ဆွဲဆောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်! သူမ၏သတင်းစကားသည်ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ရှိပြီးယနေ့ပြောင်းလဲနေသောအလုပ်ခွင်တွင်အလွန်သက်ဆိုင်သည်။ ခင်ဗျားရဲ့ကွန်ဖရင့်အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်အရမ်းအကြံပေးလိမ့်မယ်။ ”
“ မနေ့ကအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အစည်းအဝေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ့လူစုလူဝေးကသဘောကျဖို့ခက်တယ်။ မင်းရဲ့မိန့်ခွန်းအပြီးငါချက်ချင်းပဲအကောင်းမြင်ချက်တွေအများကြီးရခဲ့တယ်။ သငျသညျအဖွဲ့သည်အားသွန်ခွန်စိုက်အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်2ရက်ကြာ kickoff ၏နောက်ဆုံးညီလာခံခဲ့တွင်ပါဝင်ခဲ့တယ်။ မလွယ်ကူပါ။ ငါအချိန်မရွေးသင့်ကိုအကြံပြုလိမ့်မယ်! နောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာငါတို့လမ်းဖြတ်ကူးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
CBC နှင့်ရေဒီယို - ကနေဒါမီဒီယာဖြေရှင်းချက်များ
“ Cheryl Cran ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ NOHRC 2016 ညီလာခံမှာနေ့လည်စာစားပေးတဲ့သူပါ။ 2020 Vision နဲ့အတူသူမ၏အဓိကခေါင်းဆောင် - HR ပညာရှင်များအတွက်ခေါင်းဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ HR ပညာရှင်များအတွက်အလွန်မှန်ကန်သည်။ သူမ၏ခေါင်းဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုနှင့်လက်ရှိအလုပ်၏အနာဂတ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်း၏သတင်းစကားသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကြားရန်လိုအပ်သည်။ Cheryl သည်ပရိသတ်ကိုစေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ဒေါသတကြီးတွစ်တာနှင့်သူမ၏မေးခွန်းများကိုစာတိုပေးပို့ခြင်းဖြင့်သူမကတိုက်ရိုက်နှင့်စဉ်းစားစွာဖြေဆိုခဲ့သည်။ တက်ရောက်လာသူများထံမှအပြုသဘောဆောင်သည့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သည်။ သင်၏ဆွေးနွေးပွဲသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်အတွက် Cheryl Cran ကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်အမင်းအထူးအကြံပြုလိုသည်။ ”
NOHRC ညီလာခံ 2016 ၏သဘာပတိ
“ ကျနော်တို့ Cheryl Cran ကိုမကြာသေးခင်က ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအစည်းအဝေးမှာအဓိကပြောခဲ့သူပါ။ သူက“ အမြန်အရှိန်အဟုန်နဲ့နည်းပညာအလုပ်ခွင်တွင် ဦး ဆောင်ပြောင်းလဲမှု” ဆိုတဲ့သူမရဲ့သတင်းစကားကအဓိကအချက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္valueတွင်၎င်းတို့ကိုပိုမိုတန်ဖိုးရှိစေမည့်အပြင်ပြောင်းလဲနေသောအလုပ်ခွင်၏သတင်းစကားကိုပါပေးမည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နိုင်သည့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်သူများကိုကျွန်ုပ်တို့လိုလားသည်။ Cheryl ၏အရေးပါသောအရေးကြီးသောသတင်းစကားကိုစဉ်ဆက်မပြတ်မျှဝေခြင်းနှင့်အတူမျှဝေခြင်း၊ မျိုးဆက်များနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းနှင့်နည်းပညာများကိုမြှင့်တင်ခြင်းစသည်တို့ကိုပျော်ရွှင်စွာပျော်ရွှင်စွာခံစားခဲ့ရကြောင်းတက်ရောက်သူများကစိတ်အားထက်သန်စွာလက်ခံခဲ့သည်။ လျှောက်ထားနိုင်တဲ့ 'take away' မက်ဆေ့ခ်ျတွေတောင်းလာတယ်။ Cheryl ကဒီထက်ပိုပြီးပေးတယ်၊ ငါတို့ Cheryl နဲ့ထပ်ပြီးအလုပ်လုပ်မှာပါ”
ကုလားထိုင် / စီစဉ်သူ ပဉ္စမနှစ်ပတ်လည် Crowe ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထိပ်သီးအစည်းအဝေး 2015
Cheryl Cran သည်နိုင်ငံတကာဟိုတယ်၊ Motel & Restaurant Show ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော Hospitality Leadership Forum တွင်အဓိကဟောပြောသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ audience ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုလုပ်ငန်းခွင်မှခေါင်းဆောင်များနှင့်ကျောင်းသားများသည် Cheryl ၏ခေါင်းဆောင်မှုခွဲဝေမှုနှင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ခေါင်းဆောင်မှုလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သောသတင်းစကားကိုလက်ခံခဲ့ကြသည်။ Cheryl ၏တင်ဆက်မှုသည်ပရိသတ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ Cheryl သည်တက်ရောက်လာသူများကိုစာပို့ရန်နှင့်စာတိုရေးရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ရောက်သူများဆီမှရရှိသောတုံ့ပြန်ချက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၊ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ညီလာခံအစီအစဉ်တွင်ထူးခြားသည့်ထပ်ပေါင်းထည့်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
K.Moore၊ ဒါရိုက်တာကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်ပွဲများ အမေရိကန်ဟိုတယ် & တည်းခိုခန်း
“ Cheryl Cran ဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပမယ့်နှစ်ပတ်လည်အလုပ်အမှုဆောင်မဟာဗျူဟာအစည်းအဝေးကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီးရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရမ်းအံ့သြမိပါတယ်။ Cheryl ၏အကူအညီဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်သတင်းစကား၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ကတိတော်ကိုပြည့်စုံစေရန်ပြည်တွင်း၌ဘာတွေလိုအပ်သည်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုအဆင့်သို့ ဦး ဆောင်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည့်အရာများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်သတင်းကိုကြည်လင်ပြတ်သားအောင်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခဲ့သည်။ ။ Cheryl သည်မဟာဗျူဟာအစည်းအဝေးမတိုင်မှီမဟာဗျူဟာအစည်းအဝေးမတိုင်မှီမဟာဗျူဟာအစည်းအဝေး၏လမ်းညွှန်ချက်ကိုရေးဆွဲရန်အတွက်အချက်အလက်များနှင့်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်အတွက်ကွန်ဖရင့်ခေါ်ဆိုမှုများတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်အဖွဲ့သည်အချိန်ပေးခဲ့သည်။ သူမအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီအတွက်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏အနာဂတ်ကိုမည်သို့ရှုမြင်ပုံနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်များကိုစုဆောင်းရန်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ Cheryl သည်ကြီးမားသောဒေတာများနှင့်အကြောင်းအရာများကိုစုဆောင်းနိုင်ပြီး၎င်းအားဖြတ်သန်း။ စစ်ထုတ်ပြီးနောက်ခေါင်းဆောင်များနှင့်စီးပွားရေးကိုကြီးထွားလာရန်အထောက်အကူပြုသည့်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောလမ်းစဉ်ကိုပေးသည်။ သူမသည်စတိုင်သည်တိုက်ရိုက်ကျသော်လည်းပျော်စရာကောင်းသည်။ သူမသည်ကုမ္ပဏီ၏အလုံးစုံရည်မှန်းချက်များကိုအဆင့်မြင့်စွာပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက်လူတစ် ဦး ချင်းစီလိုအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်သည်။ Cheryl သည်ခေါင်းဆောင်မှုကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်အကြံဥာဏ်၊ ဖန်တီးမှုနှင့်ရလဒ်များကိုအာရုံစိုက်ပြီးသူနှင့်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
Ron Laudner, စီအီးအို ဆက်သွယ်ရေး Omnitel
“ Cheryl Cran ရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်၊ အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်အခြားအဖွဲ့များကိုတင်ဆက်မှုသည်အချိန်တန်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်နှစ်တာခေါင်းဆောင်မှုညီလာခံကိုကျင်းပခဲ့ပြီး Cheryl ဟာနှစ်ရက်တာအတွက်နိဂုံးချုပ်သူပါ။ သူမအတွက်ကော်ပိုရိတ်အခြေအနေနှင့်ပါတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုပါ ၀ င်နိုင်သည့်၊ ပျော်စရာကောင်းသော၊ အသိဉာဏ်ရှိစေသောနှင့်လှုံ့ဆော်ပေးသောအတွေးအခေါ်ဖြင့်လှည့်စားနိုင်စွမ်းသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ Cheryl ၏တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှကျွန်ုပ်တို့အပြုသဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်ချက်များရရှိခဲ့ပြီးသူမ၏သတင်းစကားသည်နှစ်ရက်တာ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံကြောင်းနှင့်သူမအနေဖြင့်ကြားနာခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏အလုပ်တွင်သူတို့၏ချဉ်းကပ်မှုကိုပြောင်းလဲရန်ဆန္ဒရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရကြောင်းမှတ်ချက်များပေးခဲ့သည်။ Cheryl သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ဖရင့်ကိုထူးခြားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်စေရန်သုတေသန၊ ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးနှင့်အခြားအရာများကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။
D. Dumont၊ HR အမှုဆောင် Jamieson ဓာတ်ခွဲခန်း
“ Cheryl Cran ရဲ့ 2020 Vision နဲ့ Lead Change အကြောင်းကိုအဓိကပြောခဲ့တာကတော့ဒီငွေဟာမှန်ကန်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ EO Arizona အခန်း ၀ င်များသည်အလွန်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိသည့်စွန့် ဦး တီထွင်သူများ ဖြစ်၍ ၎င်းတို့သည် Cheryl ၏တင်ပြချက်တွင်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်စီးပွားရေးဆက်စပ်မှုများကြောင့်ဆွဲဆောင်ခံရသည်။ သူမတွင်မတူကွဲပြားသောကွဲပြားခြားနားသောအခွင့်အလမ်းရှိသည့်အုပ်စုတွင်မတူကွဲပြားသောစွမ်းရည်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်ပရိသတ်သုံးဒါဇင်ကျော်ရှိသည်။ သူသည်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်ပြောင်းလဲမှုကို ဦး ဆောင်။ စီးပွားရေးကိုထိရောက်စွာ အသုံးချ၍ တိုးတက်မှုရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းအတည်ပြုသည်။ တစ် ဦး multigenerational အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု။ သူမအပြောင်းအလဲအတွက်ဖြေရှင်းနည်းတွင်နည်းပညာကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ လူမှုမီဒီယာကိုမဟာဗျူဟာကျစွာသုံးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းရှင်အုပ်စု၏အကြံပေးချက်မှာ Cheryl ၏ Keynote သည်ယခင်လေ့လာမှုဖြစ်စဉ်များတွင်သူတို့တက်ရောက်ခဲ့သမျှအားလုံးထက်အိမ်တွင်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်သည်ဟုသူတို့ထင်ခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ကနောက်တဖန် Cheryl နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်!"
အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၊ Arizona Vantage အငြိမ်းစားအစီအစဉ်များ
“ Cheryl Cran သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ GAM ကွန်ဖရင့်အတွင်းပိုင်းစာရင်းစစ်ဆေးသူများအတွက်နိဂုံးချုပ်ပြောသောစကားဖြစ်သည်။ သူမ၏ ဦး ဆောင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်သောသူမ၏တင်ပြချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်များ၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Cheryl ၏အဖြစ်အပျက်အကြိုစစ်တမ်းသည်ပရိသတ်ကိုထောက်လှမ်းရေးများကိုစုဆောင်းခဲ့ပြီး၎င်းသည်သူမ၏တင်ဆက်မှုကိုအပြည့်အဝပြုပြင်နိုင်ခဲ့သည် ထို့အပြင်သူမတင်ပြမီသက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်သွင်းရန်သူမ၏မတိုင်မီတင်ပြချက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းအားဖြင့်အထက်နှင့်ကျော်လွန်သွား၏။ သူမသည်ပျော်စရာကောင်းသော၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုအတွက်စေ့ဆော်မှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောခေါင်းဆောင်မှုမဟာဗျူဟာများပေးခဲ့သည်။ သူမအနေဖြင့်လူများအားအတွေးအခေါ်များကိုဖယ်ထုတ်ပြီးသူတို့၏အလေ့အကျင့်အခြေအနေများတွင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်“ လုပ်ဆောင်ရန်ပစ္စည်းများ” ကိုပေးခဲ့သည်ကိုသူနှစ်သက်သည်။ မင်းရဲ့အဖြစ်အပျက် (သို့) ကွန်ဖရင့်အတွက် Cheryl ကိုငါအရမ်းထောက်ခံတယ်။ ”
ဒါရိုက်တာ၊ ညီလာခံ ပြည်တွင်းစာရင်းစစ်များ Institute
ဘီစီနည်းပညာ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်နိုင်ငံသားဝန်ဆောင်မှုများ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် UniverCITZy ညီလာခံဒုတိယနေ့တွင် Cheryl Cran သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဟောပြောသူဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမနောက်ဆက်တွဲအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနံနက်စာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုဆောင်အဖွဲ့အားပြောကြားခဲ့သည်။ Cheryl ၏ ၂၀၂၀ Vision မှခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးသူ၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ The Evolutionary Leader သည်အလွန်ထူးခြားသည်။ သူမမှာကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်များနှင့်တိုက်ရိုက်လိုချင်သော livestream နှင့် livestream ဝေးလံသောပရိသတ်များပါ ၀ င်သည်။ Cheryl ၏ထူးခြားသောဖြန့်ချီရေးပုံစံတွင်အုပ်စုနှင့်လျင်မြန်စွာ၊ ရင်းနှီးစွာဆက်သွယ်ခြင်း၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိခြင်းနှင့်အတွေးအခေါ်ဖြစ်စေသောအယူအဆများ၊ ကျွန်ုပ်တို့အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်လက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်များနှင့်ဖြေရှင်းမှုများပါဝင်သည်။ သူမရဲ့ဂီတကကျွန်တော်တို့ကိုထိုင်ခုံမှာကခုန်စေတယ်။ ကျနော်တို့ Cheryl နှင့်အတူကျိန်းသေအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်! "
S. Biblow၊ အကြီးတန်းအကြံပေး၊ ပြည်သူ့နှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် ဘီစီနည်းပညာ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်ပြည်သူ့ ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ကြီးဌာန